Ixabiso eliphantsi lePatio Wicker Rattan Swings Chair yangaphandle yokuHlenga ngeSinyithi eshushu sithengise, ifenitshala yangaphandle yangaphandle kwiTshayinaChinaSupplier.com
Tianjin K & J International Trading Co., Ltd ..
I-OEM, ODM, Abanye
Intshona Melika, iYurophu
Inkampani yethu yasekwa ngo-2014, siye Factory yethu Shengfang Town kwiPhondo Hebei; Ukungenisa izixhobo eziphambili kunye netekhnoloji yokuvelisa iintlobo zezitulo, iitafile njlnjnemva kweminyaka eliqela h ...
Indawo yokubonelela Furniture Ifenitshala yangaphandle Ixabiso eliphantsi lePatio Wicker Rattan Swings Outwardor Sihlalo Sihlalo kunye ne-Metal Stand Hot Sell
Ixabiso eliphantsi lePatio Wicker Rattan Swings Outwardor Sihlalo Sihlalo kunye ne-Metal Stand Hot Sell
Izixhobo ze-1 I-US $ 1077.00 / iziqwenga
Iimveliso ezingaphezulu zesitulo seplastiki nceda ucofe kule foto ilandelayo ingena kwiphepha lethu lasekhaya ukujonga
Yangaphandle Patio PE Rattan Swing nguSihlalo NamI-f frame Lixabiso iqanda Usihlalo oxhonyiweyo
Mnyama, mhlophe, bomvu, tyheli, njalo njalo;
Ubungakanani bebhasikiti: 115w * 75d * 125h
I-90pcs / 40HQ
15-35days emva kokufumana idiphozithi
Inkampani yethu urhwebo yasekwa ngo-2014, siye Factory zethu ezifumaneka ngo-2006 Shengfang Town Town Hebei;
imizibuko nezixhobo eziphambili kunye netekhnoloji yokuvelisa iintlobo zezitulo, iitafile njl. Emva kweminyaka eliqela yoyilo olunzima kunye nokusebenza, inkampani yethu iye yenza iseti epheleleyo yenkqubo yemveliso kunye nolawulo kunye nomgaqo-nkqubo wokuhlola.
Iimveliso zethu eziphambili zibandakanya izitulo zeplastiki, mnaizitulo zetalente, iitafile ze-MDF. Phantse ikhulu leentlobo zisandula ukwenziwa, zintle kwaye zihlala ixesha elide.
Ngaphezulu kunye namaxabiso asezantsi, iimveliso zethu zithengiswa ekhaya kwaye zithunyelwa eHolland, eItalt, eNgilani, ePoland, eSpain, eCzek, eRashiya ,, eMelika, eJapan, eSingapore, njl.
Umzi-mveliso wethu ufumaneka ngo-2006; ukusuka ngo-2014 senza inkampani entsha yokurhweba;
Silapha kwinkonzo yeeyure ezingama-24; Yenza inkonzo engcono kuwe;
Sineqela lethu elisemgangathweni; Kwiimveliso ezijongwe kumgca wokuvelisa.
Esona sihlalo senze ingxelo yovavanyo ye-EN12520 ukuhlangabezana neemfuno zabathengi. Umgangatho esinokusebenzisana nawoqinisekisa ukuba;
Kwiphakheji sihlala siyenza nge-4pcs / ctn okanye 2pcs / ctn; Ibhokisi sisebenzisa i-5ply brown brown; Iphakheji enokwenziwa ngokulandela iimfuno zabathengi.
Umbuzo 1: Zininzi izihlalo ezingafakwanga kwimarike, ungaqinisekisa njani ukuba ulawulo lomgangatho?Sinento co yethu umgangathoIqela le-ntrol ukujonga iimpahla ngaphambi kwephakeji kunye nezitulo ezininzi esele sizenzile kuvavanyonfim iimveliso kakuhle.Umbuzo 2: njani aubuchule bakho bemveliso? kwaye ungaqinisekisa njani ukuba iimpahla zethu ziya kuba ukuhanjiswa kwangexesha?Supply ukubanakho 80000pcs ngenyanga nganye; ukuhanjiswa kwexesha libuyiselwe kubathengi bethu (ngaphandle kwe coNdingenakuthintela).Umbuzo 3: njani aubuchule bokuyila? Sineqela lethu lokuphuhlisa, unyaka nonyaka umzi-mveliso wethu uza kuphuhlisa uyilo olutsha. I-OEM nayo inokwamkela kwaye inike imfihlo yeshishini contract kuyilo olukhuselekileyo. Umbuzo 4: Ngaba ndingabeka iodolo enye encinci okokuqala ukuvavanya umgangatho?Uku-odola okuncinci kulungile ukuba sikwenze. I-MOQ yi-PCS ezingama-50.Umbuzo 5: Ngaba i vist mveliso yakho?Wamkelekile ukukhupha umzi-mveliso wethu. kwaye siya kunika imoto yasimahla.
Umatshini wokutshiza webhotile ye-Semi-ngokuzenzekelayo ye-PET yeBhotile eyenza uMatshini wokuBumba uMatshini wokuBumba iPetti yoMatshini ilungele ukuvelisa iplasitiki yePET containers kunye neebhotile kuyo yonke imilo.
Uluhlu lwegadi Ukuyilwa kwangaphambili kweSofa Isetyana yentsimbi yePatio Sofa
US $ 973.80 / Beka
I-China Patio yoLuka kwiNtambo yokuHamba isihlalo seFenitshala yangaphandle
US $ 158.80 / Beka
US $ 387.13 / Iiseti
Isigulana igadi yeCarche Courtyard Beach Roundtan Rattan Ngaphandle kwegadi Swing Seating Covers Bed
igadi sofa yifenitshala yeglasi yealuminiyam isakhelo sefenitshala sofa yangaphandle yesofa ecaleni kwecala
US $ 635.00 / Iiseti
jolisa kwizitulo zangaphandle
izitulo zangaphandle zeplastiki
iingcingo zombane isitulo esingaphandle
izitulo zangaphandle ezimfusa
Ixabiso eliphantsi lePatio Wicker Rattan Swings yangaphandle
US $ 1077.00 / Iipayile
Yangaphandle Patio PE Rattan Swing Sihlalo Nge Metal F
I-Bamboo yangaphakathi ejikeleze iqanda lokujinga igadi Ch
US $ 1065.00 / Iipayile
Igumbi lokuHlala ngaphakathi ngaphakathi ngaphandle kweQanda eliBini le-Rattan
US $ 10110.00 / Iipayile
Mnu Adam Ruan
Immimiselo & nemiqathango Isibhengezo umthetho wabucala Tianjin K & J International Trading Co., Ltd ..